Signkick Marketplaces: Mitondra takela-by amin'ny takelaka 'Click-to-Purchase' | Martech Zone
The Doka ivelan'ny trano indostria dia indostria goavambe sy manambola. Amin'izao vanim-potoana misavoritaka nomerika izao, ny fifandraisana amin'ny mpanjifa rehefa "mandeha" eny amin'ny habakabaka dia mbola mitazona lanja lehibe. Ny takelaka, ny fialofana amin'ny bus, ny afisy ary ny dokam-barotra dia ampahany amin'ny andavanandron'ny mpanjifa isan'andro. Manolotra fotoana tsy tambo isaina hanaparitahana hafatra mazava ho an'ny mpihaino mifandraika izy ireo nefa tsy hifaninana amin'ny dokam-barotra an'arivony maro hafa.
Saingy tsy mora foana ny manao fampielezan-kevitra ivelan'ny trano. Ny fanamby lehibe atrehin'ny indostria OOH dia ny fahazoana miditra…
Nahazo vola 100,000 XNUMX pounds ho an'ny fampielezan-kevitra OOH?
Ny olana atrehin'ny tompona haino aman-jery OOH dia ny vidin'izy ireo saika mitovy amin'ny fandaminana sy famandrihana fampielezana £ 100,000 500 tahaka ny fampielezan-kevitra XNUMX pounds. Ny habetsaky ny fotoanan'ny varotra, ny fotoam-pitantananana mitovy, ny fotoana famolavolana mitovy dia miditra amin'ny doka fanaovana bileta mandritra ny roa herinandro ho an'ny serivisy fantson-drano eo an-toerana an'i Joe Bloggs, toy ny amin'ny fampielezan-kevitra nasionaly sy tetibola be izay mihodina amam-bolana maro.
Tena tsy misy dikany izany. Raha tompona haino aman-jery manana takelaka hofan-trano ianao dia hataonao lohalaharana ireo fampielezan-kevitra nasionaly afaka mandoa vola be. Izay mety hanasarotra ny orinasa kely manana teti-bola maotina mba hijerena rehefa manofa habaka dokambarotra any ivelany. Ary mahamenatra izany, na ho an'ireo orinasa madinidinika izay tsy mahita fotoam-barotra lehibe, ary koa ho an'ireo tompona haino aman-jery, izay tsy mahita mpanjifa mety ho maro.
Ny vahaolana dia automatisation
Tsy ao an-trano manam-pahaizana momba ny dokam-barotra, Signkick namolavola vahaolana momba an'io olana io. Izy ireo dia miara-miasa amin'ny tompona haino aman-jery sy mpanome serivisy hanamora ny fizotran'ny famandrihana. Ny automatisation dia mahatonga ny fizotrany ho lafo kokoa, midika izany fa ny tompona haino aman-jery dia tsy mila manodina ny mpanjifa mifototra amin'ny teti-bola kely kokoa. Ny lozisialy ampiasain'izy ireo hanaovana an'io dia antsoina Signkick Marketplaces.
Signkick Marketplaces dia rindrambaiko ahafahan'ny tompona haino aman-jery manangana mba hahafahan'ny mpanjifa mahita sy mamandrika ny toerana fanaovana dokam-barotra ataon'izy ireo an-tserasera. Mampifandray-up miaraka amin'ireo rafitry ny fananan'ny tompona haino aman-jery ity mba hanehoana ny fisian'ny tranokala afisy amin'ny mpanjifa amin'ny sari-tany an-tserasera.
Natao hanamorana ny tsenan'ny dokam-barotra OOH ho mora azon'ny rehetra, ny tsena Signkick dia ahafahan'ny orinasa manao:
Mikaroha ary boky ny habaka fanaovana dokambarotra an-tserasera - Ny mpanjifa dia afaka mahita haingana izay tranokala afisy, takelaka fanaovana takelaka ary efijery nomerika misy, haharitra hafiriana sy ho an'ny ohatrinona. Ny tompona haino aman-jery dia afaka misafidy ny safidiny manokana, toy ny vidiny aseho ny toerana, inona ny fampahalalana fanampiny haseho, ary raha misokatra ho an'ny besinimaro ny sehatra, na ho an'ireo mpanjifany mivantana sy maso ivoho ihany.
Manaraha fanentanana - Raha vantany vao voapetraka ny sehatra fanaovana dokam-barotra dia afaka manara-maso ny fivoarany ny mpanjifa, toa anao amin'ny rafitra fandefasana parcel.
Tantano ny kanto - Afaka mampakatra ny sanganasan'izy ireo manokana ny mpanjifa, na miara-miasa amin'ny Tompona Media hamolavola ny kanto ho an'ny doka. Ny rafitra dia manana fizotra mihetsika, izay manomboka amin'ny fandefasana ny famaritana ny kanto ho an'ny mpanjifa amin'ny fotoana anaovana famandrihana ary mifarana amin'ny fandefasana ireo kanto amin'ny mpanonta tianao.
Raiso ny fampahatsiahivana sy ny fanavaozana ny mailaka - Ny fampahatsiahivana sy fanavaozana mandeha ho azy dia manome antoka fa ny dingana tsirairay amin'ny fizotrany dia ampitaina tsara amin'ny mpanjifa, saingy tsy misy tanana ho an'ny tompona haino aman-jery araka izay azo atao.
Tsy toy ny rindrambaiko hafa misy hamandrihana toerana fanaovana dokambarotra any ivelany, Signkick Marketplaces dia tsy mifantoka amin'ny Digital Out of Home fotsiny. Ny rafitra dia ahafahan'ny mpividy manara-maso ny peta-drindrina sy ny takelaka fanaovana pirinty mahazatra azy ireo amin'ny fomba mitovy amin'ny ahafahany manara-maso ny afisain'izy ireo nomerika.
Ny tatitra dia miasa manokatra fotoana misokatra ho an'ny Tompona Media
Signkick Marketplaces dia manana lahasa faharoa, dia ny manangona sy mamakafaka ireo angona mifototra amin'ny hoe iza no mividy ny toerana fanaovana dokam-barotra OOH. Amin'ny alàlan'ny famakafakana ny fahazaran'ny mpanjifany, ny zavatra tadiavin'izy ireo ary ny fotoana, ny tompona haino aman-jery dia afaka mampihatra ny vidin'ny tranokala tohana data, mampivelatra vola miditra ary mamorona programa marketing indray mahomby.
Fandinihana tranga Signkick: JCDecaux
Trondro vaventy ao amin'ny indostrian'ny OOH, JCDecaux dia niara-niasa tamin'ny Signkick Marketplaces mba handray famandrihana mandeha ho azy ho an'ireo tranokalan'izy ireo any Belzika. JCDecaux dia niaiky fa ilaina ny mandrindra ny fizotrany mba hanokafana ireo lalam-barotra vaovao.
Amin'ny alàlan'ny fanaovana ny fizotran'ny famandrihana ho mahomby kokoa, ary hahafahan'ny mpanjifa mitantana ny fampielezan-keviny manokana, JCDecaux dia afaka nifantoka bebe kokoa tamin'ny paikady varotra sy ny fananganana fifandraisana amin'ireo mpanjifa ho avy. Midika koa izany fa afaka nivarotra toerana fanaovana dokambarotra izy ireo ary nanorina fifandraisana tamin'ireo mpanjifa misy teti-bola kely kokoa. Rehefa manomboka mitombo ireo fanentanana fanaovana dokambarotra kely ireo dia ny JCDecaux no voalohany mahalala.
Vaovao be daholo, miaraka amin'ny JCDecaux's tranonkala vaovao dia niasa nandritra ny 2 volana monja, saingy efa tonga ny famandrihana.
Ny automatisation dia ny hoavin'ny OOH
Miova ny fotoana, ary toy izany koa ny fomba antenain'ny olona hividy. Amin'ity vanim-potoana nomerika ity dia afaka mividy ny zava-drehetra ianao amin'ny akanjo sy sakafo, hatramin'ny fiara sy ny fialantsasatra an-tserasera. Ka maninona raha afisy sy takelaka?
Signkick Marketplaces dia mamela ny tompona haino aman-jery hiditra ao tsindrio click-to-buying, ary hanaiky ny mpanjifa manana teti-bola kely kokoa. Famandrihana mandeha ho azy sy fandrindrana ny doka fanaovana dokam-barotra dia ahafahan'ny tsirairay miditra amin'ny serivisy sy ny fahafaha-manao izay tsy azon'ny mpanjifa lehibe ihany.
Tags: JCDecauxOOHAutomatique OOHivelan'ny tranosignkick